Waa kuma Sheekh Aadan Madoobe? - BANAADIRSOM
Home WARARKA MAANTA Waa kuma Sheekh Aadan Madoobe?
Muqdisho (Banaadirsom) – Waxaa xalay saqdii dhexe teendhada Afisyoone loogu doortay guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Adan Maxamed Nuur (Adan Madoobe), kadib markii uu helay 163 cod, halka xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ay isugu soo hadheen wareegga labaad uu helay 89 cod.
Hadaba waa kuma Sheekh Aadan Madoobe?
Sheekh Aadan Madoobe Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa ku dhashay degmada Xuddur ee xarunta gobolka Bakool.
Aaden Madoobe waxa uu horay u soo noqday Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Ururka RRA, ka hor inta uusan ku biirin Dowladdii KMG aheyd, isagoo soo noqday Wasiirka Cadaaladda iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka KMG ah, sannadihii 2007 ilaa 2010. Taas oo ka dhigan in markii labaad uu xilkan qabanayo.
Sheekh Aadan Madoobe wuxuu muddo kooban ahaa ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya, ka dib markii uu xilka iska casilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee Cabdillaahi Yuusuf, 29 December 2008 iyada oo markii danbena 31kii bishii january 2009, Shariif Sheekh Axmed loogu codeeyay inuu noqdo madaxweynaha cusub.
January 2014, waxaa loo magacaabay Wasiirka Warshadaha iyo Ganacsiga oo u magacaabay Raysal Wasaare Cabdiweli Seekh Axmed.
Previous articleXildhibaano ka kooban laba kutlad oo fowdo ka wada kulanka golaha shacabka
Next articleHirShabelle oo shaacisay jadwalka kuraasta HOP141, HOP146 iyo HOP135